Dowlad goboleedyada GalMudug iyo HirShabeelle oo heshiis kala saxiixday | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Dowlad goboleedyada GalMudug iyo HirShabeelle oo heshiis kala saxiixday
Dowlad goboleedyada GalMudug iyo HirShabeelle oo heshiis kala saxiixday
Magaalada Muqdisho waxaa kulan ku yeeshay guddoomiyaha barlamaanka dawlad gobaleedka Hir-shabelle Cusmaan Barre Maxamed iyo guddoomiyaha baarlamaanka GalMudug Maxamed Nuur Gacal.
Kulankaan ayaa ahaa mid is xog iyo xaalad wareysi oo ku saabsan xaaladaha labada dawalad gobaleed iyo xaaladda guud uu ku sugan yahay dalka iyo matalaada siyaasadeed ee loo qoondeeyey gobalka Benaadir
Markii uu soo dhamaadey kulanka u dhaxeeyey mas’uuliyiinta ayey waxey ka soo saareen qodobadi ay ka wada hadleen iyo waxey ku heshieen.
2. In si wadajir ah loogu hambalyeeyo lana bogaadiyo shacabka iyo maamulka gobalka Banaadir oo helay xuquuqdii ay ku lahaayeen matalaada Aqalka Sare ee barlamaanka Federaalka, loona mahadceliyo Golaha Shacabka iyo madaxweynaha Federaalka oo u galay dadaal dheer kana mira dhaliyey.
3. In si wadajir ah loo bogaadiyo, gacanna lagu siiyo Golayaasha Federaalka iyo Guddiga Doorashooyinka Qaran dadaalka weyn ee ay ugu jiraan sidii dadka Soomaaliyeed ay usoo dooran lahaayeen wakiiladooda ku matalaya labada Aqal ee Barlamaanka Federaalka, loogana gudbi lahaa doorasho dadban oo dambe.
4. In wadajir looga qeyb-galo shirka madaxweyne Farmaajo ku casuumay Madaxweyneyaasha dawlad gobaleedyada 5 – 8 bisha Luulyo 2020, kana soo baxaan go’aanno dadka iyo dalka Soomaalyeed u aayaan.
5. In la sii wado kulamadii iyo shirarkii is kaashi ee Golayaasha Xeer-Dejinta Federaalka iyo Dawlad Gobaleedyada lana fuliyo Heshiisyadii horay loo wada gaaray.